महान शहीद रामवृक्ष यादव बहुआयामिक प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो - अध्यक्ष प्रचण्ड - Left Review Online
क. रामवृक्ष यादवको २५ औं स्मृति दिवस
मधेसको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीको क्षति न्यूनीकरण, सुक्दै गएको जलाधार, आगलागी, डुबानको समस्या हटाउन ‘मास्टर प्लान’ आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता क. माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट सरकारले मात्र देश विकास गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार दुई तिहाइको स्थिर सरकार रहेकोले यहाँ अब विकास तथा निर्माणको कार्य हुने अवस्था रहेको र वर्तमान सरकारले त्यो काम राम्रोसँग गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले शहीद रामवृक्ष यादवको पुण्यतिथिको अवसरमा वीरेन्द्र बजार–यदुकोहा सडकको नाम शहीद रामवृक्षको नामबाट नामाकरण गर्न गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो ।
त्यसरी नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले देशमा जनयुद्ध नभएको भए अहिले देशमा कुनै पनि हालतमा संघीयता नआउने बताउनु भयो । उहाँले नेकपाको बैठक नबसेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले शहीद रामवृक्ष यादव त्याग र तपस्याका लागि प्रतिस्पर्धा रहेको समयको नेता रहेको भन्दै उनको तुलना नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले अहिलेसम्म शहीद यादवको स्मृति दिवस धनुषामा मात्र मनाउने गरिएकोमा यसलाई केन्द्रमा पनि मनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
शहीद रामवृक्ष यादवको २०५१ साल भदौ २ गतेको दिन हत्या गरिएको थियो । त्यसपछि धनुषाको बरमझियामा हरेक वर्ष भदौ २ गते स्मृति दिवस आयोजना गरिँदै आएको छ।
पछिल्लाे - मेरा बा’को भेस्ट
अघिल्लाे - महान् शहीद क. रामवृक्ष यादव – जसलाई कुटी कुटी मारियो